Site na nke a, enwere m olileanya na ị nwere obi ụtọ banyere ohere nke ịme ihe nyocha gị. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ, ị nwere ike ugbua na-eme nchọpụta ndị a n'oge niile. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ọrụ na ụlọ ọrụ ịntanetị, ị nwere ike iche na ịnweghị ike ịgba ọsọ nyocha dijitalụ. N'ụzọ dị mma, nke ahụ ezighị ezi: site na obere creativity na ịrụsi ọrụ ike, onye ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ nyocha dijitalụ.
Dịka nzọụkwụ mbụ, ọ ga-enye aka ịmata ọdịiche dị n'etiti ụzọ abụọ kachasị mma: ime ya n'onwe gị ma ọ bụ soro ndị dị ike na-emekọ ihe. E nwekwara ụzọ dị iche iche dị iche iche ị nwere ike isi mee ya onwe gị: ị nwere ike ịnwale na gburugburu ebe obibi, wuo nnwale onwe gị, ma ọ bụ mepụta ngwaahịa gị maka nchọpụta ugboro ugboro. Dịka ị ga-ahụ site na ihe atụ ndị dị n'okpuru ebe a, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a kachasị mma n'ọnọdụ niile, ọ kachasị mma iche banyere ha dịka ịchụ ego ahịa dị n'akụkụ anọ dị iche iche: ego, njikwa, ọdịdị, na ụkpụrụ omume (nọmba 4.12).
Nyochaa 4.12: Nchịkọta nke mmepụta ego maka ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi mee ka nnwale gị mee. Site na ego m na-ekwu na ọ ga-efu onye nyocha ahụ ihe gbasara oge na ego. Site nchịkwa m pụtara ikike ime ihe ịchọrọ n'ihe gbasara ịbanye ndị na-agụ, ịba nkata, ịnye ọgwụgwọ, na ihe nlele. Site n'ememe m na-ekwu ókè ebe mkpebi mkpebi ahụ na-emetụta ndị na-enweta kwa ụbọchị; Rịba ama na ọhụụ dị elu anaghị adị mkpa mgbe nile iji nyochaa echiche (Falk and Heckman 2009) . Site n'omume m na-ekwu na ikike nke ndị na-eme nchọpụta nke ọma bu ijikwa nsogbu ndị nwere ike ịmalite.